သင့္ရဲ႕ Facebook Timeline ေပၚမွာ ၾကည့္ရႈခြင့္ႏွင့္ ပို႔စ္တင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ျခင္း – DigitalTimes.com.mm
152 Shares 222 Views
Facebook ေပၚမွ သူငယ္ခ်င္းေတြထဲမွာ မိသားစု၀င္ေတြ၊ သင္နဲ႔ အျပင္ကမာၻမွာ သိကြ်မ္းတဲ့ လူေတြ ပါ၀င္သလို လံုး၀သိကြ်မ္းျခင္းမရွိတဲ့ လူေတြလည္း မ်ားစြာပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ မသိကြ်မ္းသူေတြက သင့္ရဲ႕ Timeline ေပၚမွာ ပို႔စ္ေတြတင္တာ၊ Timeline ေပၚမွ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ေတြပါတဲ့ ပို႔စ္ေတြကို အမ်ားျမင္ရေအာင္ Share လုပ္ေနတာေတြလည္း ရွိေကာင္းရွိႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီလို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာေတြ ၾကံဳေတြ႔ေနရတယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ Timeline ေပၚမွာ ၾကည့္ရႈခြင့္နဲ႔ ပို႔စ္တင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္တာေတြကို ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။
အျခားသူမ်ားက သင့္ရဲ႕ Timeline ေပၚမွာ ပို႔စ္တင္ေနတာကို မႏွစ္သက္ဘူးဆိုရင္ Home Page ရဲ႕ ညာဘက္အေပၚထိပ္မွ Menu ကို ႏွိပ္ၿပီး Settings ထဲသြားပါ။ Timeline and Tagging ကို တစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီး Timeline က႑မွ “Who can post on your timeline?” ရဲ႕ ညာဘက္မွ Edit ကို ႏွိပ္ပါ။ “ Only Me” ေျပာင္းေပးပါ။ ဒါဆိုရင္ အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ သင့္ရဲ႕ Timeline ေပၚမွာ ပို႔စ္တင္ခြင့္ ရရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။
သင့္ရဲ႕ Timeline ေပၚမွာ ပို႔စ္တင္ခြင့္ကို ပိတ္လိုက္တာဟာ အလြန္ကန္႔သတ္ရာက်ပါတယ္။ အဲဒီအစား သင့္ရဲ႕ Timeline ေပၚမွ ပို႔စ္ေတြကို ၾကည့္ရႈခြင့္ကို ကန္႔သတ္တာက ကန္႔သတ္မႈကို ေျဖေလ်ာ့ေပးရာက်ပါတယ္။ Settings > Timeline and Tagging ထဲသြားၿပီး Timeline က႑မွ “ Who can see what others post on your timeline? “ ရဲ႕ ညာဘက္မွ Edit ကို ႏွိပ္ပါ။ “ Only Me” ကို ေရြးေပးရင္ သင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားေတာင္ သင့္ရဲ႕ Timeline မွ ပို႔စ္မ်ားကို ၾကည့္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ “ Friends “ ကို ေရြးေပးရင္ေတာ့ သင့့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။
သင့်ရဲ့ Facebook Timeline ပေါ်မှာ ကြည့်ရှုခွင့်နှင့် ပို့စ်တင်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ခြင်း
Facebook ပေါ်မှ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ မိသားစုဝင်တွေ၊ သင်နဲ့ အပြင်ကမ္ဘာမှာ သိကျွမ်းတဲ့ လူတွေ ပါဝင်သလို လုံးဝသိကျွမ်းခြင်းမရှိတဲ့ လူတွေလည်း များစွာပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် မသိကျွမ်းသူတွေက သင့်ရဲ့ Timeline ပေါ်မှာ ပို့စ်တွေတင်တာ၊ Timeline ပေါ်မှ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေပါတဲ့ ပို့စ်တွေကို အများမြင်ရအောင် Share လုပ်နေတာတွေလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာတွေ ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Timeline ပေါ်မှာ ကြည့်ရှုခွင့်နဲ့ ပို့စ်တင်ခွင့်ကို ကန့်သတ်တာတွေကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
အခြားသူများက သင့်ရဲ့ Timeline ပေါ်မှာ ပို့စ်တင်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ခြင်း
အခြားသူများက သင့်ရဲ့ Timeline ပေါ်မှာ ပို့စ်တင်နေတာကို မနှစ်သက်ဘူးဆိုရင် Home Page ရဲ့ ညာဘက်အပေါ်ထိပ်မှ Menu ကို နှိပ်ပြီး Settings ထဲသွားပါ။ Timeline and Tagging ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး Timeline ကဏ္ဍမှ “Who can post on your timeline?” ရဲ့ ညာဘက်မှ Edit ကို နှိပ်ပါ။ “ Only Me” ပြောင်းပေးပါ။ ဒါဆိုရင် အခြားမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ သင့်ရဲ့ Timeline ပေါ်မှာ ပို့စ်တင်ခွင့် ရရှိမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
သင့်ရဲ့ Timeline ကို ကြည့်ရှုခွင့်ကို ကန့်သတ်ခြင်း
သင့်ရဲ့ Timeline ပေါ်မှာ ပို့စ်တင်ခွင့်ကို ပိတ်လိုက်တာဟာ အလွန်ကန့်သတ်ရာကျပါတယ်။ အဲဒီအစား သင့်ရဲ့ Timeline ပေါ်မှ ပို့စ်တွေကို ကြည့်ရှုခွင့်ကို ကန့်သတ်တာက ကန့်သတ်မှုကို ဖြေလျော့ပေးရာကျပါတယ်။ Settings > Timeline and Tagging ထဲသွားပြီး Timeline ကဏ္ဍမှ “ Who can see what others post on your timeline? “ ရဲ့ ညာဘက်မှ Edit ကို နှိပ်ပါ။ “ Only Me” ကို ရွေးပေးရင် သင့် သူငယ်ချင်းများတောင် သင့်ရဲ့ Timeline မှ ပို့စ်များကို ကြည့်လို့ မရတော့ပါဘူး။ “ Friends “ ကို ရွေးပေးရင်တော့ သင့့် သူငယ်ချင်းများက ကြည့်နိုင်ပါတယ်။